Travel Tips Archives | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သင်သွားဖူးတဲ့ခရီးတိုင်းကိုမှတ်မိနိုင်သလား, သင်နှစ်သက်သောအမြင်များ, နှင့်သင်မြည်းစမ်းခဲ့သောအစားအစာများ? ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်, ထို့ကြောင့်အမှတ်တရများသည်ထိုအမှတ်တရများကိုတစ်သက်တာတည်မြဲစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ခရီးတစ်ခုကနေဘာလက်ဆောင်တွေယူလာလဲ? ဒီမှာအကောင်းဆုံးအမှတ်တရလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ…
ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...
အားဖြင့် Nikki Gabriel
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သင် steakhouse ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုကြားရတဲ့အခါ, ချက်ချင်းသင်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဥရောပတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, ဤရွေ့ကားကျွဲနွားနောက်ကွယ်မှနှင့်ကင်စားသုံးရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာများမဟုတ်ပါဘူး. Wagyu နှင့် Kobe, အရာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမဲသားဖြတ်တောက်မှုစဉ်းစားနေကြသည်, ဂျပန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်. ထို့အပြင်,…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:9မိနစ်များ ကမ္ဘာကြီးသည်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, သို့သော်ပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးသွားများသည်ခရီးသွား tr ည့်ကျောင်များထဲသို့ကျပြီးအဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှုများ၏သားကောင်များဖြစ်လာနိုင်သည်. ဤများမှာ 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှရှောင်ရှားရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု; ဥရောပကနေတရုတ်အထိ, နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြား. မီးရထားပို့ဆောင်ရေးသည် Eco-Friendly နည်းလမ်းဖြစ်သည်…